Ihe eji agba bọọlụ, agba agba agba agba agba agba agba agba, onwe onye na - akwado bọọlụ bọọlụ - Baigong
Gbado anya na Ije Ozi
Cross osisi amị
Ahaziri na-abụghị ọkọlọtọ biarin
Mgbidi na-abụghị nke ọkọlọtọ
Mkpa-walled bọl biarin
U uzo ibu
Automotive mmiri mgbapụta aro agba
Omenala akwa aka
Ọhịa na-etinye onwe ya mmanụ
"Anụ ngwaahịa mma, na-eke a mbụ na klas enterprise, na-eju afọ ahịa 'mkpa maka ojiji" bụ ụlọ ọrụ na-adịghị agbanwe agbanwe na-achụ, na "ahịa mbụ, aha mbụ" bụ anyị ụlọ ọrụ ebighi ebi nzube.
Companylọ ọrụ ahụ ga-enye ndị ọrụ azịza ekwentị ụbọchị niile iji nyere ndị ọrụ aka idozi nsogbu ọ bụla zutere na ngwaahịa na sistemụ ahụ.
Ọ bụrụhaala na ịhọrọ ngwaahịa anyị, a ga-enye ha n'efu ma duzie gị ka ị jiri, a ga-enyefekwa ha ngwa ngwa o kwere mee.
Ọnwa Mbụ 28, 2021
Nkwado na-abụghị ọkwa ejirila nke nta nke nta bụrụ isi ihe mejupụtara ya
Ndị na-abụghị ọkọlọtọ biarin bụ ihe dị mkpa na isi ihe dị mkpa n'ime ụlọ ọrụ na-emepụta akụrụngwa, nke na-ekpebi arụmọrụ, ogo na ntụkwasị obi nke akụrụngwa na ngwaahịa ndị ọbịa, ma mara ya dị ka "obi" nke akụrụngwa nrụpụta. Af ... / p>
All ụdị nke n'ibu scars, dị ka abrasions, ọkọ, nsogbu unan, bruises, wdg, ga-eme ka ogbenye amị echichi, ime ka eccentric ibu na nchegbu ịta, na-eme ka a na-ebelata adiana ziri ezi na ọrụ ndụ. Nrụrụ aka, akpụkpọ ojii, na olulu, nke abụọ bụ d ... / p>